काठमाडौँ । ‘संघीयताको पक्षमा प्राप्त जनादेश न आकस्मिक हो न चामत्कारिक। संघीयता प्राप्तिको मूल आधार त बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलन हो। अहिलेको केन्द्रीय सरकार संघीयता मात्र नभई संविधानकै हत्या गर्न उद्यत छ। यसलाई जोगाउन सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ।’
एकैपटक ५२ एसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ? [नामावलीसहित] ४७ मिनेट पहिले
नेपाल प्रहरीका ५७ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ? ५२ मिनेट पहिले